To Myanmar Countdown
အရဟံ= လွန်ကဲထူးမြတ်သော သီလဂုဏ်
သမာဓိဂုဏ် ပညာဂုဏ် ၀ိမုတ္တိဂုဏ်
မူသောကြောင့်လူ နတ် ဗြဟ္မာ သတ္တ၀ါ
အရ ဟံ= လောဘ ဒေါသ မောဟအစရှိသော ကိလေ
အရ ဟံ= သံသရာစက်၏အထောက်အပံ့တို့ကိုချိုးဖျက်
အ ရဟံ= မျက်မှောက်မျက်ကွယ်အချင်းခပ်သိမ်းစင်ကြယ်
ကို သူတစ်ပါးထံနည်းမခံပဲ ကိုယ်တိုင်ဉာဏ်
ထူးရှစ်ပါး၊စရဏမည်သော အခြေခံအကျင့်တရား ဆယ့်ငါးပါးတို့နှင့်ပြည့်စုံတော်မူပေသော
သုဂတော=သတ္တ၀ါတို့အားအကျိုးများကြောင်းဟုတ်မှန်သော စကားကောင်းကိုသာ ပြောဆိုတော်မူ
သုဂတော=မဂ္ဂင်ရှစ်ဖြာတင့်တယ်တော်အမူအရာဖြင့်ကောင်း စွာသွားခြင်း ကောင်းစွာ ဖြစ်ခြင်းရှိတော်မူသော
ဘဂ၀ါ=ဘုန်းတော်အနန္တ ကံတော်အနန္တ ဉာဏ်တော်အနန္တ
အရဟံ ကိုးပါးသောဂုဏ်တော် ဆယ်ပါးသော
လျှော့ ကန်တော့ပါ၏ မြတ်စွာဘုရား။
Posted by ပန်းချစ်​သူ at 10:55 PM No comments:
Posted by ပန်းချစ်​သူ at 10:08 AM No comments:
၁။ ဗျာဒိတ်ခံယူသောဘ၀ - သုမေဓာရှင်ရသေ့ဘ၀၊
၂။ ဗျာဒိတ်ခံယူသောနေ့ - ကဆုန်လပြည့်နေ့၊
၃။ ဗျာဒိတ်ပေးသောဘုရား - ဒီပင်္ကရာဘုရား၊
၄။ ပါရမီဖြည့်ဖက် - သုမိတ္တာအမျိုးသမီး၊
၅။ ပါရမီဖြည့်ရာကာလ - လေးသင်္ချေနှင့်ကမ္ဘာတစ်သိမ်း(သုမေဓာရှင်ရသေ့ဘ၀မှ ဝေဿန္တရာဘ၀ထိ)
၆။ ဖြည့်ခဲ့သောပါရမီများ - ဒါနစသော ပါရမီ(၁၀)ပါး၊
၇။ ပါရမီဖြည့်ရခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက် - သတ္တ၀ါများ၏ အကျိုးဆောင်ရွက်ရန်၊
၈။ နောက်ဆုံးစံခဲ့သောနတ်ပြည် - တုသိတာနတ်ပြည်၊
၉။ နတ်သားအမည် - သေတကေတုမည်သောနတ်သား၊
၁၀။ ဘုရားဖြစ်ရန် တောင်းပန်သူ - နတ်၊ ဗြဟ္မာများ၊
၁၁။ ကြည့်ခြင်းကြီးငါးပါး - ကာလ၊ ဒီပ၊ ဒေသ၊ ကုလ၊ မာတုအာယုပရိစ္ဆေဒ၊
၁၂။ မယ်တော်အိပ်မက် - နတ်မင်းများကအနောတတ္တအိုင်မှရေကိုသယ်ပြီးချိုးပေးခြင်း၊ကျာက်ဖျာမှာအိပ်၊
၁၃။သန္ဓေယူသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ်(၆၇)ခု၊ ၀ါဆိုလပြည့် ကြာသပတေးနေ့၊
၁၄။ မိဘအမည် - သုဒ္ဓေါဒန၊ မာယာဒေ၀ီ၊
၁၅။ နေပြည်တော် - ကပိလ၀တ်ပြည်(သက္ကတိုင်း)၊
၁၆။ အမျိုးအနွယ် - သာကီဝင်မင်းမျိုး၊
၁၇။ ဖွားသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ်(၆၈)ခု၊ ကဆုန်လပြည့် သောကြာနေ့၊
၁၈။ဖွားရာဌာန - လုမ္ဗိနီ ဥယျာဉ်(ကပိလ၀တ်နှင့် ဒေ၀ဒဟကြား)၊
၁၉။ ဖွားကာစ စကား - အဂ္ဂေါဟမသ္မိံ လောကဿ၊ ဇေဋ္ဌောဟမသ္မိံ လောကဿ၊ သေဋ္ဌော ဟမသိံ္မ
၂၀။ ဖွားခါစခြေလှမ်း - မြောက်အရပ်သို့ (၇)လှမ်း၊
၂၁။ ဘုရားဖြစ်မည်ဟု ဧကန်ဟောသူ - ကောဏ္ဍညပုဏ္ဏား၊
၂၂။ မိထွေးတော်အမည် - ဂေါတမီ၊
၂၃။ မင်းသားအမည် - သိဒ္ဓတ္ထမင်းသား၊
၂၄။ ဖွားဖက်တော်များ - ယသော်ဓရာ၊ အာနန္ဒာ၊ ဆန္ဒအမတ်၊ ကာလုဒါယီအမတ်၊ကဏ္ဍကမြင်း၊ဗာဓိပင်၊
၂၅။ မင်းသားငယ်ကိုမြင်၍ ငိုသောရသေ့ - ဒေ၀ီလရသေ့၊
၂၆။ ပြသောအတတ်ပညာ - လေးအတတ်ပညာ၊
၂၇။ ကြင်ယာတော် - ယသော်ဓရာ၊
၂၈။ စံသောနန်းပြဿဒ် - နွေရာသီစံဘုံ(၅)ဆင့်ရှိ (ရမ္မ)၊ ဆောင်းရာသီစံဘုံ(၇)ဆင့်ရှိ (သုရမ္မ)၊
၂၉။ရင်သွေးတော် - ရာဟုလာ၊
၃၀။ နန်းစံသောနှစ် - ၁၃ နှစ် (၁၆နှစ် မှ ၂၉နှစ်အထိ)၊
၃၁။ မြင်သောနိမိတ် - သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်း၊ (လေးလတစ်ကြိမ်တွေ့မြင်သည်)၊
၃၂။ တောထွက်သောအသက် -(၂၉)နှစ်၊
၃၃။ တောထွက်သောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ်(၉၇)ခု၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ တနင်္လာနေ့၊ သန်းခေါင်ယံအချိန်၊
၃၄။ တောထွက်ချိန်ပါသူ - ကဏ္ဍကမြင်းနှင့် မြင်းပြီးဆွဲမောင်ဆန်၊
၃၅။ ဖြတ်ကူးသောမြစ် - အနော်မာမြစ်၊
၃၆။ ပယ်သောအရာ - ဆံတော်နှင့်အ၀တ်၊
၃၇။ ဆံတော်တည်ရာစေတီ - တာဝတိံသာနတ်ပြည် စူဠာမဏိစေတီ၊
၃၈။ အ၀တ်တော်စေတီ - ဗြဟ္မာပြည် ဒုဿစေတီ၊
၃၉။ သင်္ကန်းပရိက္ခရာလှူသူ - ဃဋိကာရဗြဟ္မာ၊
၄၀။ တောထွက်ပြီးစ ဦးစွာဆရာ - အာဠာရ ရသေ့၊ ဥဒကရသေ့၊
၄၁။ ဒုက္ကရစရိယာကျင့်ရာဋ္ဌာန - ဥရုဝေဠတော၊
၄၂။ ဒုက္ကရစရိယာကျင့်သောနှစ် - (၆)နှစ်၊
၄၃။ ဘုရားဖြစ်သောနှစ် - မဟာသက္ကရာဇ်(၁၀၃)ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့၊
၄၄။ ဘုရားဖြစ်ချိန်အသက် - (၃၅)နှစ်၊
၄၅။ ဘုရားဖြစ်ချိန်လူတို့သက်တမ်း - (၁၀၀)နှစ်၊
၄၆။ ဒုက္ကရစရိယာကျင့်ချိန်အလုပ်အကြွေး- ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦး၊
၄၇။ ဃနာနို့ဆွမ်းကပ်လှူသူ - သုဇာတာအမျိုးသမီး(သေနနိဂုံး)။
၄၈။ ရွှေခွက်မျှောသောမြစ် - နေရဉ္စရာမြစ်၊
၄၉။ ရွှေခွက်သိမ်းသူ - ကာလနဂါး၊
၅၀။ ဗောဓိပင်သွားမြက်လှူသူ - သောတ္ထိယမြက်ရိတ်သမား၊
၅၁။ မြက်မှဖြစ်သောအရာ - ရွှေပလ္လင်၊
၅၂။ ဘုရားအောင်မြင်သောအရာ - ဗောဓိပင်နှင့် ရွှေပလ္လင်၊
၅၃။ ရွှေပလ္လင်လာလုသူ - ၀သ၀တ္တီနတ်ပြည်နေ မာရ်နတ်၊
၅၄။ ဘုရားဘက်မှသက်သေပြုသူ - ၀သုန္ဒရေ မြေစောင့်နတ်၊
၅၅။ ဘုရားကိုလာ၍ဖျားရောင်းသူ - တဏှာ၊ အရတီ၊ ရာဂါ (မာရ်နတ်၏ သမီးများ)၊
၅၆။ ဘုရားရှင်ရှေးဦးစွာရသောဥာဏ်များ-ပထမယာမ်၌ ပုဗ္ဗေနိဝါသဥာဏ်၊ ဒုတိယယာမ်၌ ဒိဗ္ဗစက္ခုဥာဏ်၊
တတိယ ယမ်၌ အာသ၀က္ခယဥာဏ်။
၅၇။ဘုရားရှင်၏ ပထမဗုဒ္ဓ၀စန - အနေကဇာတိသံသာရံ စသော စိတ်ထဲမှ ဆင်ခြင်သောစကား၊
၅၈။ ခုနှစ်ရက် ခုနှစ်လီ သတ္တဟများ - ပလ္လင်္က သတ္တာဟ၊ အနိမိသသတ္တာဟ ရတနစင်္ကမသတ္တာဟ၊
၅၉။ မာရ်နတ်၏ သမီးများလာဖြားယောင်းသော သတ္တာဟ - အဇပါလသတ္တာဟ၊
၆၀။ သုတ်၊ အဘိဓမ္မာ၊ ၀ိနည်းကို ဆင်ခြင်သောသတ္တာဟ - ရတနဃရ သတ္တာဟ၊
၆၁။ တပုဿ၊ ဘလ္လိကတို့ကို ဆံတော်ပေးသောသတ္တာဟ -လင်းလွန်းပင်သတ္တာဟ၊
၆၂။ ဘုရားရှင်တရားဟောရန်တောင်းပန်သူ - သဟမ္ပတိဗြဟ္မာ၊
၆၃။ ဘုရားရှင် ဗောဓိပင်အကြွလမ်းမှာ တွေ့သူတက္ကဒွန်း - ဥပက၊
၆၄။ ဓမ္မစကြာဟောသောနေ့ - (၁၀၃)ခု၊ ၀ါဆိုလပြည့်၊ စနေနေ့၊
၆၅။ ပထမဦးဆုံးရဟန္တာဖြစ်သူ - ရှင်ကောဏ္ဍည၊
၆၆။ ဒွေဝါစိကသရဏဂုံတည်သူ - တပုဿနှင့် ဘလ္လိက၊
၆၇။ တေ၀ါစိက သရဏဂုံတည်သူ - ယသ သတို့သားမိသားစု၊
၆၈။ လက်ယာရံ အဂ္ဂသာဝက - ရှင်သာရိပုတြာ၊
၆၉။ လက်ဝဲရံ အဂ္ဂသာဝက - ရှင်မဟာမောဂ္ဂလာန်၊
၇၀။ ဘုရားရှင်အဆုံးအမ - ပရိယတ္တိ၊ ပဋိပတ္တိ၊ ပဋိဝေဓ၊
၇၁။ ကျင့်စဉ်သိက္ခာ - သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာ၊
၇၂။ ချမှတ်သောလမ်းစဉ် - မဂ္ဂင်ရှစ်ပါး၊ မဇ္ဈိမပဋိပဒါလမ်းစဉ်၊
၇၃။ တရားဟောသောနှစ် - (၄၅)၀ါ၊
၇၄။ ဟောခဲ့သောတရားပေါင်း - ဓမ္မက္ခန္ဓာပေါင်း (၈၄၀၀၀)၊
၇၅။ ဘုရားရှင်အားလုပ်ကြွေးသူ - ရှင်အာန္ဒာ၊
၇၆။ နောက်ဆုံးဆွမ်းလှူသူ - စုန္ဒသူကြွယ်၊
၇၇။ နောက်ဆုံးကျွတ်သူ - သုဘဒ္ဒပရိဗိုဇ်၊
၇၈။ နောက်ဆုံးစကား - ဟန္ဒဒါနိ ဘိက္ခဝေ အာမန္တယာမိ ဝေါ ၀ယဓမ္မာ အပ္ပမာဒေန သမ္ပာဒေထ၊
၇၉။ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုသောအသက် - သက်တော်(၈၀)၊
၈၀။ ပရိနိဗ္ဗာန်စံသောနေ့ - မဟာသက္ကရာဇ်(၁၄၈)ခု၊ ကဆုန်လပြည့်၊ အင်္ဂါနေ့၊
၈၁။ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုရာအရပ် - မလ္လာတိုင်း၊ မလ္လာမင်းတို့၏ အင်ကြင်းဥယျာဉ်၊
၈၂။ တေဇောဓာတ်လောင်သောနေ့ - (၁၄၈)ခု၊ ကဆုန်လဆုတ်(၁၂)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့၊
၈၃။ ဓာတ်တော်ဝေသောပုဏ္ဏား - ဒေါနပုဏ္ဏား၊
၈၄။ ကြွင်းသောဓာတ်တော် - ၈ စိတ် (၂တင်း)၊
၈၅။ မပြိုကွဲသောဓာတ်တော် - စွယ်တော်လေးဆူ၊ ညှပ်ရိုးတော်နှစ်ဆူ၊ နဖူးသင်းကျစ်တစ်ဆူ။
ယခုတင်ပြသည့် ဗုဒ္ဓ၀င်အကျဉ်းအား ဗုဒ္ဓဘာသာယဉ်ကျေးမှုနွေရာသီသင်တန်း စာအုပ်မှကူးယူတင်ပြပါသည်။
Sasanahitakaryee at 10:07
Posted by ပန်းချစ်​သူ at 6:08 AM No comments:
မြန်မာဆန်မှ မြန်မာအလှ ဖြစ်မည်မို့ သတိလေးတော့ ထားစေချင်
ကျွန်တော်ကတော့ မြန်မာလူမျိုး တစ်ဦးပါ။ မြန်မာပီသတဲ့ ဘယ်မြန်မာကို မဆို လေးစားတန်ဖိုး ထားပါ တယ်။ မြန်မာပီသတာကို အရမ်းသဘောကျတတ်တဲ့ ကျွန်တော့်အတွက် အံ့သြသင့်စရာ အကောင်းဆုံး မြင် ကွင်းတွေကို မြင်လိုက်တာမို့ ဒီစာကို ရေးပေးလိုက်ခြင်းပါ။ အာဖရိက ဘုန်းကြီး ဒက်စမွန် တူးတူးနဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်။ ================================ဒူးထောက်စေရန် ၀တ်ရုံကြီး ခြုံခဲ့သလားကမ္ဘာကတော့ ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဘယ်ဆုရှင်လို့ ပြောကြမယ်။ ဘာသာတရားတွေ အနေနဲ့ကြည့်ရင် သူက ဘုန်းကြီး ပေါ့။ ငြိမ်းချမ်းရေးကို ဆောင်ရွက်တယ် ဆိုပေမယ့် ထာဝရ ဘုရားသခင်တွေ၊ ကယ်တင် ရှင်တွေ ဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ ကြည့်ရင် အာဖရိကကြီးဟာ အယူ တိမ်းနေသူပါပဲ။ လက်မှာလည်း အကွင်းတွေဝတ်၊ လက် စွပ် ကြီး တပြောင်ပြောင်နဲ့ လက်ဝါးကပ်တိုင်ကြီးကို ချိတ်ပြီး ပန်းရောင်ဝတ်စုံကြီး ၀တ်လာတော့ ဒေါ်အောင် ဆန်း စုကြည် က ဒူးထောက် ဦးညွှတ်တယ်။ အာမင် ပုံစံ လုပ်တယ်။ သြော်..ဘုန်းကြီးလို့ သဘော ထားတာ နေ မှာပေါ့လို့ တွေးမဆုံးခင် အဲဒီဘုန်းကြီးဆိုသူက ၈၈ ရုံးခန်း ကို ရှပ်အင်္ကျီနဲ့ ရောက် သွားပြန်ရော။ ဒူးထောက်ပြီး အခြားဘာသာလို ကန်တော့နေတာ၊ ကုလားထိုင်မှာ ထိုင်ပြီး လက်သီးလေး ဆုပ် လို့ သြ၀ါဒ ခံနေတာတွေကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လို ခံစားမိမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး။ မြန်မာဟာ မြန်မာ မ ဟုတ်လား။ နောက် သိပ်မကြာခင် ထပ်တွေ့တယ်။ သွားလေရာမှာ ပုဝါစကြီးကို လည်ပင်းမှာ နောက်ပြန်ပတ်ပတ် သွားနေ တာလေ။ အဆိုးဆုံးက လွှတ်တော်ထဲ မှာတောင်မှ ပုဝါစကြီး နောက်ပြန်ပတ်ပြီး အဆိုတွေ ဆွေးနွေးနေေ သး တယ်။ မြန်မာ မိန်းကလေး မှန်သမျှ ပုဝါကို နောက်ပြန် ပတ်တာ တစ်ခါမှ မမြင်ဖူး ပါဘူး ဗျာ။ ခန့်ထည်မှု၊ လှပမှု တစ်ခုအနေနဲ့ သုံးတဲ့ ပုဝါကို အရှေ့လေးမှာချပြီး သိမ်မွေ့တဲ့ မြန်မာတွေကို မြင်ရာ ကနေ အခုတော့ ကုလားမ တွေ ဆာရီပတ်သလို အမူအကျင့်တွေက လွှတ်တော်ထဲ အထိတောင် ရောက် ကုန် ပါပေါ့လား။ ဒီလို ဒီလိုဒီလိုတွေဟာဒီလို ကုလားမတွေ ၀တ်တာပါ။ဒီမင်းသမီးတွေဆီက သင်ပါအုံး မြန်မာ ၀တ်စုံနဲ့ ကတ္တီပါ ဒေါက်မြင့်လေးဟာ မြန်မာသင်္ကေတ ဖြစ်ပေမယ့် မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ လေဒီရှုးကတော့ ဟို မရောက် ဒီမရောက်လို့ ပြောလည်း ရပါတယ်။ ပိုပြီး ဆိုးတာက မြန်မာဝတ်စုံက ပုဝါကို ကုလားလို ပတ်ပြီး စ တိုင်သစ် လုပ်နေတာ မကြာခင် မြန်မာစတိုင်ဆိုတာ ဒီလို ဖြစ်တော့မှာမို့ ရေးလိုက်ရပါတယ် ဗျာ။ မောင်ရေး From:MEGwww.mmdailystar.com 1Myanmar Daily Star Group at 18:00tyy
Posted by ပန်းချစ်​သူ at 9:53 PM No comments:
Myanmar Daily Star: မြန်မာဆန်မှ မြန်မာအလှ ဖြစ်မည်မို့ သတိလေးတော့ ထားစေချင်
Posted by ပန်းချစ်​သူ at 9:39 PM No comments:
Posted by ပန်းချစ်​သူ at 3:17 AM No comments:
မြန်မာနိင်ငံတော်၏ အနာဂတ် ငွေစက်ကူ အသစ် အားလုံး အတွက်
Aung: မနိုင်းရေ ...... ဖြတ်သန်းလာခဲ့တဲ့ မနိုင်းဘ၀တစ်လျောက်မှာ အပျော်ဆုံးတစ်နေ့ အကြောင်းကို စာတစ်ပုဒ်လောက် ရေးပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ် မေ့လို့မရနိုင်တဲ့ နေ့တစ်နေ့အကြောင်းကိုပေါ့။
ရွှေမန်းသား "အောင်" ရဲ့ အပြောကို Orange Chit Thu ကပါ ထောက်ခံခဲ့လို့ ဒီစာကို ရေးဖြစ်ပါတယ်။ အပျော်ဆုံးနေ့ဆိုတာ တစ်ချို့လူတွေအတွက် အောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့၊ နိုင်ငံခြားထွက်တဲ့နေ့၊ ထီပေါက်တဲ့နေ့.... စတာတွေ ဖြစ်ရင်ဖြစ်မယ်။ ကျွန်မအတွက်က ပျော်တဲ့နေ့တွေပဲရှိတယ်.. အပျော်ဆုံးနေ့ဆိုတာမျိုး သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိဖူးဘူး။ ပျော်တဲ့နေ့မှာ ရယ်မောစရာ၊ ရင်ခုန်ကြည်နူးစရာတွေ ပါမယ်ဆိုတာ မပြောလည်း သိကြပါတယ်။ အဲဒီလိုပဲ ကျွန်မအတွက် မေ့မရတဲ့နေ့ဆိုပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ် မရှိပေမယ့် ပျော်ရွှင်စရာ၊ ဝမ်းနည်းစရာနဲ့ မေ့လို့မရတဲ့ အဖြစ်အပျက်တွေ အများကြီးရှိခဲ့တယ်။ ဝမ်းနည်းစရာကို မေ့ထားပြီး ပျော်စရာတွေကိုပဲ ကျွန်မ များများမှတ်ထားပါတယ်။ အခုလည်း (ကျွန်မအတွက်) အမှတ်တရလည်းဖြစ်၊ ရယ်လည်း ရယ်ချင်တဲ့ အဖြစ်တစ်ခုကို ခပ်ပျော်ပျော်လေး ရေးချလိုက်ပါတယ်။
ကျွန်မအခု သင်ရတဲ့ ကလေးတွေက ၁၂နှစ်၊ ၁၃နှစ် အရွယ်တွေများတယ်။ သူတို့အရွယ်က အရာရာ စူးစမ်းစပ်စုချင်ကြတဲ့ အရွယ်တွေ၊ ဆိုးလို့ ပျော်လို့ ကောင်းတဲ့အရွယ်တွေဖြစ်တယ်။ အတန်းထဲမှာ အများက ဗမာစကား ကောင်းကောင်းမပြောတတ်တဲ့ ရှမ်း၊ အခါ၊ တရုတ်၊ ဝ တွေဖြစ်တယ်။ "ဆရာမ ကျွန်တော် ရေစားချင်တယ်" ဆိုတဲ့ လူမျိုးတွေပေါ့။ (ရေသောက်ချင်တာကို ဆိုလိုပါတယ်) ကျွန်မလည်း ရှမ်းလိုက မလည်မဝယ်၊ အခါ၊ ဝလိုက မတတ်တော့ တော်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်။ အတန်းထဲမှာ စကားနှစ်မျိုး၊ သုံးမျိုးတတ်တဲ့ ကျောင်းသားတွေကို ဘာသာပြန်ငှားထားရတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အတန်းတက်စ တစ်နေ့မှာ ရှမ်းမ ကျောင်းသူလေးတစ်ယောက်က ကျွန်မကို လာတိုင်တယ်။ "ဆရာမ.. ဆရာမ.. အားတီ သမီး ရင်ကို လာကိုင်တယ်။ အခုနားက သမီးအမေ ကျောင်းလိုက်လာတယ်၊ အားတီကို မတွေ့လို့ ဆရာမကို တိုင်တာ" တဲ့။ (ဗမာစကားတောင် ကောင်းကောင်းမပြောတတ်သူမို့ "ရင်"လို့ သူမသုံးဘူး။ ကျွန်မက ဖတ်ရ ယဉ်ကျေးအောင် ရင်လို့ သုံးလိုက်တာပါ) တိုက်ရိုက်ကြီး ပြောလာတဲ့ စကားကြောင့် ကျွန်မ ကြောင်သွားတယ်။ နားလည်း ရှက်သွားသလိုပဲ။ သူပြောတဲ့ အားတီဆိုတဲ့ ရှမ်းကောင်လေးက အတန်းထဲမှာ ဟိုလူစ၊ ဒီလူစနဲ့ တော်တော်ဆိုးတဲ့ ကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်။ ဒီကျောင်းသူလေးရဲ့ ရင်ကို စနောက်ရင်း ထိမိတာလား? သူ တမင်ပဲ သွားကိုင်ခဲ့တာလား မသိဘူး...
ကျောင်းသားက ဆရာမကို အားကိုးတကြီးနဲ့ တိုင်လာပြီဆိုတော့ ကျွန်မလည်း "အေး.. ခဏနေ ဆရာမ ဆုံးမပေးမယ်" ဆိုပြီး စာစသင်လိုက်တယ်။ အုပ်ထိန်းသူတွေပါ ပါလာနိုင်လောက်တဲ့ ပထမဆုံးအကြိမ် ကြုံတဲ့ ပြဿနာမို့ ကျွန်မ ဘယ်လိုဖြေရှင်းရမလဲ မသိခဲ့ဘူး။ လုပ်သက်က မရင့်တော့ အတွေ့အကြုံလည်း မရှိဖြစ်နေခဲ့တယ်။ အားတီကို လူသိရှင်ကြား ဆိုဆုံးမမိရင် သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကို ကျောင်းသားတွေ ဝိုင်းလှောင်ကြမှာလည်း စိုးတယ်။ ဒါကြောင့် စာသင်ရင်း အားတီကို ဘယ်လို ဆုံးမရမလဲလို့ ကျွန်မတွေးနေမိတယ်။
အတန်းပြောင်းချိန်ရောက်တော့ အားတီကို ကျွန်မနားခေါ်လိုက်တယ်။
"အားတီ .. နင် သူ့ကို ဘာသွားလုပ်လဲ" လို့ ကျွန်မ မေးတော့ "ဘာမှမလုပ်ဘူး" တဲ့။
"သူ့ရင်ကို သွားကိုင်တယ်ဆို" ဆိုတော့ "ရင်" ဆိုတာကို သူနားလည်ပုံ မရလို့ "ဘာမှမလုပ်ဘူး" ဆိုတာပဲ ပြန်ဖြေတယ်။
"မိန်းကလေးက ယောက်ျားလေးတွေနဲ့ မတူဘူး။ လျှောက်သွားမထိ ရဘူးဆိုတာ မသိဘူးလား" လို့ ဆရာမကြီးလေသံနဲ့ ကျွန်မ ထပ်ပြောတော့ (နားမလည်ဟန်နဲ့) "မသိဘူး" တဲ့။ ခက်တော့နေပြီ..... သူဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကို အလွယ်တကူသိအောင် ဒီဆရာမ ဘယ်လိုရှင်းရမလဲ မသိ?
"နင်.. ဒီလို သွားလုပ်တယ်ဆို" ဆိုပြီး ရုတ်တရက် သူ့ရင်ဘတ်ကို လက်နဲ့ကိုင်သလို လုပ်ထည့်လိုက်မှ ပါးစပ်ပိတ်ပြီး သူ ခေါင်းညိတ်သွားတော့တယ်။
ကျွန်မက ရယ်လည်းရယ်ချင်၊ လက်သရမ်းချင်တဲ့ သူ့ကို ဒေါသလည်းထွက်နဲ့ မျက်နှာကို အတည်ဆုံးထားပြီး "ဘယ်လက်လဲ" လို့ မေးလိုက်တယ်။ သူဘာမှ မပြောဘဲ ညာဖက်လက်ကို ထုတ်ပေးပါတယ်။ တုတ်ယူပြီး ထုတ်ပေးတဲ့ သူ့ညာလက်ကို ကျွန်မ ခပ်နာနာလေး နှစ်ချက်ဆင့် ရိုက်ထည့်လိုက်မိတယ်။ ပြီးတော့ ယောက်ျားလေးနဲ့ မိန်းကလေးက မတူတဲ့အကြောင်း၊ လက်သရမ်းပြီး လျှောက်မထိသင့်ကြောင်း၊ ထပ်လုပ်ရင် မိဘတွေ၊ ကျောင်းအုပ်တွေပါ ပါလာနိုင်တဲ့အကြောင်း ပြောပြလိုက်တယ်။ ကျွန်မပြောတာကို အားတီ နားလည်လား? မလည်လားတော့ မသိဘူး။ ကျွန်မပြောပြီးတာနဲ့ အခန်းပြင်ကို သူထွက်သွားလိုက်တယ်။ ကျွန်မက နေရာမှာပဲ ရယ်ချင်သလိုလိုနဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်။
ကျောင်းသူတစ်ယောက် မဖွယ်မရာ လုပ်ခံလိုက်ရလို့ ကျွန်မရယ်ချင်၊ ပျော်ရွှင်သွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ နားမလည်သူကို နားလည်အောင် လုပ်ပြလိုက်တဲ့ ကိုယ့်အပြုအမှုကိုပဲ ရယ်ချင်မိတာပါ။ ဆရာမတစ်ချို့ကို ဒီအဖြစ်ပြောပြတော့ သူတို့လည်း ပြုံးမိကြတယ်။ ဒီအဖြစ်က ဆရာမဖြစ်စ အတွေ့အကြုံအဖြစ် ကျွန်မဘဝမှာ မှတ်မှတ်ရရ မေ့မရအောင် ကျန်နေခဲ့မှာ သေချာပါတယ်။
Posted by ပန်းချစ်​သူ at 11:45 PM No comments:
Welcome From My Blogs
http://dl.glitter-graphics.com/pub/665/665729kxlziwnvoh.gif -- go to www.glitter-graphics.com
ခင်ပွန်းကြီး (၁၀) ပါး။ by thein wai 18 နာရီအကြာ ၁။ ဘုရား ၂။ ပစ္စေကဗုဒ္ဓွါ ၃။ ရဟန္တာ ၄။ လက်ဝဲ အဂ္ဂသာဝက၊ လက်ျာ အဂ္ဂသာဝက ၅။ အမိ ၆။ အဖ ...
ပဋ္ဌာန်း မှန်မှန် ၊ နှစ်ရှည် ရွတ်ခြင်း၏ အကျိုးများကို ယုတ္တိ သဘောဖြင့် ဆင်ခြင်ကြည့်ခြင်း … ပဋ္ဌာန်းရွတ်တယ် ဆိုတာ ပဋ္ဌာန်း ပစ္စယ ဥဒေသ နဲ့ ပစ္စယ နိဒေ...
“အ​မေ(သို့)ဘဝခရီးရဲ့လမ်းပြကြယ်​” --.-.-.--.-.-.--.-.-.-.-.--.-.-.-.-.-.-.- ​ မျှော်​လင့်ချက်​နဲ့အသက်​ရှင်​ကြတယ်​ဆို​ပေမယ့်​ မဖြစ်​န...
တ​ပေါင်းတ​စ္ဆေ♪ ♪ ♪
ဥသြသံချီုလွမ်းစိတ်​ပို တ​ပေါင်းတ​စ္ဆေ ~~~~~~~~~ တ​ပေါင်းသစ်​ပင်​၊ ရွတ်​နုဆင်​၍ ရွှင်​ရွှင်​ပျပျ၊ ၊ သီ ဆို က၏။ ဥသြငှက်​ပျို၊​တေးသစ်​ဆိူ...
အသုံးဝင်လျက် တန်ဖိုးမဲ့ ********************* မျက်ကန်းတစ်ယောက်အတွက် မှန်တစ်ချပ်ဟာ အလကားပဲ....။ စိတ်ဓာတ်ယုတ်ညံ့သူအတွက် ပညာတတ်ခြင်းဟာ အလက...
အဆီကိုလောင်ကျွမ်းစေတဲ့ အကောင်းဆုံးအစားအသာက် ၆မျိုး Wednesday, January 20, 2016 13:00(+0630) (2 ရက် ခန့်က) အောက်မှာဖော်ပြထား...
ကုသိုလ် အကုသိုလ်ဖြစ်ခြင်း၏ အနီးဆုံးအကြောင်း ============================= ကုသိုလ်တရား ဖြစ်ခြင်း၏ အနီးဆုံးအကြောင်းသည် " ယောနိသော မနသိ...
မြန်မာဝတ်စုံနဲ့ ဂျပန်မင်းသမီးချောလေးနှစ်ယောက် Ms Rina Takeda နဲ့ Ms Yuko Fueki Maung Pauk | 4:20 PM | ...
မြတ်စွာဘုရားက စည်းစိမ်ဥစ္စာ ရရှိဖို့ထက် စိတ်ထား နှလုံးထား ရင့်ကျက်တိုးပွားအောင် ကြိုးစားကြဖို့က ပိုအရေးကြီးကြောင်း မိန့်ကြားတော် မူထားပါတယ်။ ...